Maamulka ugu badan ee odayaashiisu 'u hogaan-sameen' amarka Al-Shabaab
Mid kamid ah horjoogeyaasha Al-Shabaab oo la hadlaya odayaal dhaqameedyo | Xuquuqda Sawirka: Online
MUQDISHO, Soomaaliya – Xoogaga Al-Shabaab ayaa shaaciyey tirro odayaal dhaqameedyo ay sheegeen in ay "u hogaan-sameen" amarkooda, isla markaana ay "is-diiwaangeliyeen".
Warbaahinta ku hadasha afka kooxdan xiriirka la leh Shabakadda Al-Qaacidda ayaa lagu xusay in ay amarkooda qaateen 159 nabadoon oo ku kala nool goboladda Soomaaliya.
Marka laga reebo dowladda Puntland, Shabaabku waxay soo bandhigeen tiradda maamul walba oo kuwa waddanka ka jira ah oo ay shaaciyeen in ay"towbad keeneen".
Sidda ku xusan warbixinta, maamulka ugu badan ee ay odayaasha iska soo diiwaan-geliyaan ayaa wuxuu yahay HirShabelle, kaasi oo ay ka yimaadeen 53 oday.
Saamiga maamulada iyo odayaasha fuliyey amarka AlShabaab
Jubbaland: 33 Oday Dhaqameed
Hirshabelle: 53 Oday Dhaqameed
Koonfur Galbeed: 40 Oday Dhaqameed
Galmudug: 33 Oday Dhaqameed
"Odayaasha degaanadda Puntland waxaa towxiidka looga qabtay khadka telefoonka," ayay warbaahinta Al-Shabaab kasoo xigatay sarkaal khariyey magaciisa oo ka tirsan maleyshiyaadkaasi.
Horaantii bishan, 15-ka July, ayay ahayd markii ay Al-Shabaab soo saartay amar ay ku fareyso Odayaal Dhaqameedyadda ka qaybgalay doorashadii 2017-kii in ay si degdeg ah ku yimaadan degaanada ay maamulan.
Bayaanka ayay ku sheegtay Al-Shabaab in ay khaarijin doonto odayaasha aanan u hogaan-samin fariintooda, inta fulisana ayay sheegtey in ay "ammaan siin doonto".
Taliska Booliska maamulka Koonfur Galbeed oo uga digay cuqaasha in ay u hogaan-samaan amarka Al-Shabaab ayaa shaaciyey in Nabadoonkii dhaqan-gelin xabsi la dhigayo, marka uu soo laabto.
"Waxay bad-baadin karaan ma jirtee, kaliya waxay ka doonayaan dhaqaale ama waxay rabaa in ay ku dhahaan 'Keena qorri iyo rasaastiisa' maadaama ay saanad u la'yihiin askarigii ay qorteen," ayuu yiri taliska.
Al-Shabaab oo wali gacanta ku haysa qaybo kamid ah gobolada Soomaaliya ayaa la rumeysan yahay in ay u suurtogelineyso dhaqal-qalka amarada ay soo saaran oo xitaa ka fula Muqdisho.
Rag Shabaabnimo loogu xukumay dil toogasho oo Racfaan qaatay
Soomaliya 05.05.2019. 18:43
Labadaan xubnood ayaa loo haystaa weeraro ay ku dhinteen in ka badan 70 ruux oo ka dhacay Muqdisho.
Aqalka Sare oo dib u celinaya sharci uu u soo gudbiyay Golaha Shacabka
Soomaliya 18.04.2019. 15:10
Al-Shabaab oo dishay 4 qof, kana hadashay sababta ay u weerarto Muqdisho
Soomaliya 31.03.2019. 17:14
Sarkaal Xaaskiisa Toorey ku dilay oo dil toogasho ah lagu xukumay
Soomaliya 19.01.2019. 16:23